TOMATO "SOLEROSSO F1": SHARAXAADDA NOOCYADA KALA DUWAN - BEER CAGAARAN
Shimbir horraantii adduunka yaanyo - nooc ka mid ah yaanyada Solerosso F1
Xulashada yaanyada beerta, waxaad u baahan tahay inaad isku dardarto noocyo leh shuruudo kala duwan.
Doorka ugu horreeya waxaa lagu dalban karaa qalabka isboortiga ee "Solerosso", oo lagu kala duwan yahay dhadhan wanaagsan iyo muuqaal qurux badan.
Maqaalkeena waxaad ka heli doontaa oo keliya sharaxaad buuxda oo kala duwan ee noocyada kala duwan, laakiin sidoo kale baro astaamaha astaamaha iyo sifooyinka beerashada.
Tomato "Solerosso F1": sharaxaadda noocyada kala duwan
Waxay soo iibsadeen tarbiilayaasha Holland, oo diiwaangashan 2006. Kala duwanaanshuhu waa mid aad u sarreeya, laga bilaabo abuurka miraha muuqaalka miraha ugu horreeya, 90-95 maalmood gudahood. Solerosso F1 waa jaangooyo hore u bislaaday jiilka kowaad.
Kuurku waa mid go'aaminaya, dhexdhexaad ah, kobcinta cagaarka waa dhexdhexaad. Caleen waa mid fudud, cagaar mugdi ah, cabbirka dhexdhexaad ah. Tamaandho waxay u bislaadaan burushyada 5-6 gogo '. Wax-soo-saarka ayaa fiican, laga bilaabo 1 jibbaaran. Beerta m waxaa laga qaadi karaa ilaa 8 kg oo yaanyo ah. Galka ayaa ku habboon gobollada leh jawi diirimaad leh iyo diirran. Fikrado lagu beeray dhul furan ama filim.
dhadhan fiican ee miro bisil;
yaanyada si fiican loo hayaa;
duurka u habeeysan meel bannaan oo beerta;
Cilladaha ku dhexjira hybrid lama ogaan.
Miraha waa dhexdhexaad, dhexdhexaad ah, oo leh ribbada yar ee asliga ah.
Midabka ee yaanyada bislaado waa casaan cad, adag.
Jirka waa mid casiir leh, dhexdhexaad ah, cufnaanta qolalka abuurka waa qiyaastii 6.
Maqaarku waa khafiif, laakiin cufan, ilaalinta miro ka soo dillaac.
Dhadhanka waa wax fiican, macaan, aan biyo lahayn.
Yar, xitaa miraha leh maqaar cufan ayaa ku haboon caanaha. Waxay yihiin cusbeyn, la qaado, oo lagu daray khudradda khudradda, oo loo isticmaalo in lagu sameeyo macmacaan iyo baradho la shiiday. Tamaandho waa dhadhan fiican leh, waxay sameeyaan salad delicious, saxan dhinaca, suxuunta kulul.
Waxaad arki kartaa sawirrada yaanyo kala duwan ee "Solerosso" ee hoos ku qoran:
Tamaandho ee darajada Solerosso ku koraan habka rassadny. Goobaha warshadaha iyo beeraha, beerashada waxaa lagu dhaqmaa iyadoo aan la qaadan; habkan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa beeraha guriga.
Wixii biqilka isticmaalaya kiniinnada peat ama dheryaha leh substrate nafaqo leh oo ku salaysan humus ama peat. Kiniinnadu waa la qooyay, farcan kasta ayaa la dhigayaa, oo ku salaysan kiciyaha kobaca. Nadiifinta abuurka lagama maarmaan ma ahan, dhammaan nidaamyada lagama maarmaanka ah, wuxuu ka gudbaa ka hor intaan la iibin. Ka dib markii ay soo baxaan geedo sprouts soo baxay si iftiin dhalaalaya. Maalmaha daruuraha leh, waa in la buuxiyaa nalalka dhaadheer.
Cabbirada tayada leh waa inay ahaato mid xoog leh, dhalaalaya, oo aan xoqin. Ku waraabiyo biyo diirran oo dhexdhexaad ah. In lagu koriyo ama dhirta dhulka furan yihiin lagu beeray da'da 60 maalmood. Haddii ay ka baxsan tahay dibadda, waxaad u oggolaan kartaa dhirtu inay bararaan, oo aysan ku degdegin beerta. Si ka duwan noocyo kale, Solerosso ma daadin doono ubax, si guul leh u sii wadaan in ay sameeyaan miro ka dib transplanting.
Dhirta la beero ee dhulka ayaa si fiican u dabooli kara filimka, ilaa khatarta ah ee blowjob dhaxan. Xilligii, dhirta waxaa la quudin jiray 3-4 jeer bacriminta oo buuxa.
Solomraso kala duwan ee yaanyo waxay u adkaysatay cudurada ugu weyn ee habeenkii: fusarium wilt, verticide, cladosporia. Bisaylka hore u ilaaliyaa miraha ka soo daahay dabaylo goor dambe. Si kastaba ha ahaatee, dhirta dhalinyarada u baahan tahay in laga ilaaliyo cudurada fangas. Iyada oo dhirta waraabinta aan habboonayn ku soo baxaan caleemo, basal ama basal-yar. Xayawaanka ciriiriga ah ee ciriiriga ah ama mulching leh caws engegan, peat, iyo humus waxay ka caawinaysaa ilaalinta beerto.
Waraabinta u baahan tahay yaanyada ka dib markii lagu qalajiyo lakabka sare ee carrada. Isku-buufin ka hortag ah phytosporin ama xal manganese ah pink pink waxay caawisaa.
In sariiraha furan, yaanyada waxaa inta badan weeraro aphids, thrips, slugs dhicin, iyo Medvedka. Helitaanka calaamadaha ugu horreeya ee cayayaanka, waxaad u baahan tahay inaad qaaddo tallaabooyin degdeg ah. Laga soo bilaabo aphids ka caawisaa xal diirran oo saabuun, slugs waxaa la dilay ammonia, lagu qasi jiray biyaha. Iskuday jarida iyo cayayaanka kale ee cayayaanka ah ee cayayaanka sunta ah ama dib-u-cagaarka.
Hybrid "Solerso" ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa beerista warshadaha. Miraha si dhakhso ah u bislaan, si fiican loo kaydiyaa, in la qaado. Tani waa tayada qiimaha leh ee beeralayda hiwaayadda. Qeybo dhowr ah oo isku dhafan ayaa siin doona todoba fitamiin kahor mana u baahan doono daryeel xad dhaaf ah.